Fahasalamana: mirongatra indray ny gripa | NewsMada
Fahasalamana: mirongatra indray ny gripa
Maro ny olona manatona tobim-pahasalama noho ny gripa. Tsapa tato ho ato fa mirongatra ity aretina ity hatramin’ny nisian’ny orana raha ny teto Antananarivo manokana.
Hatramin’ny nisian’ny rotsak’orana niserana teto Antananarivo, tsikaritra ho nirongatra indray ny gripa, kohaka sy sery ary mitarika fanaviana ho an’ireo marefo. Tsy mifidy na olon-dehibe na ankizy fa tratra avokoa.
Manamarina izany indrindra ny dokotera iray amina tobim-pahasalamana andehanan’ny sarambabem-bahoaka. Voan’ny sery sy mikohaka ny ankamaroan’ny olona tonga mizaha fahasalamana ao isan’andro.
Misy ireo manavy ary misy ireo mitarika amin’ny aretin-tenda. Anisan’ny mahatonga izany fofon-tany nateraky ny orana latsaka voalohany iny. Fotoana mampihetsika indrindra ny sohika ho an’ireo sarotiny amin’ny fivadihan’ny toetr’andro ihany koa izao, raha ny nambaran’ny dokotera.
Tokony hampiana hatrany ny hery fiarovana amin’ny fihinanana voankazo matetika. Eo koa ny fisotroana rano manoloana ny hafanana be amin’izao fotoana. Manampy betsaka amin’ny fiarovan-tena amin’ny gripa ny fanaovana aro vava orona na dia mafana be aza ny andro.
Aretina mora miparitaka ny gripa ka tsara raha tsy mifanakaiky amin’ireo olona fantatra efa tsy salama.
Hatreto, tsy mbola nisy ny trangana fahasarotana tonga hatrany amin’ny fahasemporana fa gripa tsotra toy ny mahazatra no hita raha ny fanamarihan’ny dokotera nanontaniana hatrany.